‘शेर्पा समुदायलाई अमेरिकी राजनीतिमा सहभागी गराउने प्रयास हुनेछ’ – Everest Times News
‘शेर्पा समुदायलाई अमेरिकी राजनीतिमा सहभागी गराउने प्रयास हुनेछ’
अध्यक्ष, शेर्पा संघ अमेरिका
अमेरिकी शेर्पा समुदायमा भावी पुस्तालाई अमेरिकी मूलधारको राजनीतिक जागरणका लागि अमेरिकामा स्थापना भएको शेर्पा संघ अमेरिकाको प्रथम अधिवेशन हालै सम्पन्न भएको छ । एक वर्षअघि बनेको तदर्थ समितिको संयोजक निमा शेर्पा उक्त अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन भएका छन् ।
अमेरिकी नेपाली समुदायमा क्रियाशील शेर्पा संघ स्थापना देखिनै निरन्तर लाग्दै आएका व्यक्ति हुन् । अमेरिकी शेर्पा समुदायमा संघ स्थापनाको औचित्य, भूमिका र आगामी योजनाबारे अध्यक्ष शेर्पासँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानीः
शेर्पा संघ अमेरिका स्थापनाको मुख्य कारण के हो ?
प्रवासमा खुलेका संघसंस्थाले नेपाली भाषा, धर्म र साँस्कृति जोगाउने गतिविधि गरी राम्रो कामहरू गरिरहेका छन् । जुन अहिलेसम्मको समयको माग पनि हो । तर अबको आवश्यकता भनेको भावी पुस्तालाई अमेरिकाको मूलधारको राजनीतिमा कसरी अघि बढाउन भन्ने हो । यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाली अमेरिकी शेर्पा समुदायको भावी पुस्तालाई अमेरिकी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराउन शेर्पा संघ अमेरिका स्थापना भएको हो । यसको साथै नेपालको शेर्पा संघलगायत विश्वभरिका शेर्पा संघसंस्थासँग हातेमालो गदै शेर्पा समुदायको हितमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने सोचको साथ संघ स्थापना भएको हो ।
कतिपयले शेर्पा किदुग हुँदाहँुदै संघ खोलेर विभाजनतिर लागेको भन्ने आरोप पनि लगाउन थालेका छन् नि ?
कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो बिलकुलै गÞलत हो । त्यस्तो गÞलत र भ्रामक कुराको पछाडि नलाग्न म आम शेर्पा समुदाय र सबैमा अनुरोध गर्दछु । किनकि म आफू पनि शेर्पा किदुगमा ४ वर्ष सेवा गरेको व्यक्ति हुँ । अमेरिकी शेर्पा समुदायको बृहत् हितमा केही गरौँ भनेर नै हामी यसरी अघि बढेका हौ ।
अमेरिकी शेर्पा समुदायमा शेर्पा किदुग र शेर्पा संघ कसरी अघि बढ्छ ?
अमेरिकी शेर्पा समुदायमा यो दुई संस्था नङ र मासु जतिकै गाढा सम्बन्ध छ । जसरी नेपालमा शेर्पा सेवा केन्द्र र नेपाल शेर्पा संघ अघि बढेको छ त्यस्तै गरी नै हामी पनि अघि बढ्दै जानेछौ ।
शेर्पा संघ स्थापना गर्ने सोच कसरी अघि बढ्यो ?
म शेर्पा किदुगमा सचिव पदमा कार्य गर्नु भन्दा पहिलादेखि नै अग्रजहरूले शेर्पा संघ अमेरिकाको परिकल्पनासँगै आवश्यकता महसुस गरेको पाएका थिएँ । उक्त कुरालाई त्यही परिकल्पनामा मात्र सीमित नराखी समय सापेक्षित रूपमा पुरा गर्न यसको थालनी गरेका हौ ।
तपाईँको नेतृत्वमा बनेको शेर्पा संघ अमेरिकाको कार्य समिति कसरी चयन भयो ?
नेपालको विभिन्न जिल्ला हुँदै अमेरिका आई पुगेका शेर्पाहरूलाई समेट्ने अभिप्राय र हाम्रो शेर्पा संघको उद्देश्यलाई प्राप्तिको निमित्त निकै जागरुक र उत्साहितहरूलाई समेटेर नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ ।
संघको आगामी योजनाहरू के के छ ?
मुलत संघको आगामी योजनाहरू पहिलो त हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली समुदायको तर्फबाट आफ्नो सहभागिता जनाउने हो । संघले आफ्नो लक्ष्य प्रेरितको लागि विभिन्न राजनीतिक दल, न्युयोर्क सिटी र स्टेटसँग मिलेर कार्य गर्ने योजना छ ।
यसको साथै शेर्पा समुदायमा राजनीतिक चेतना फैलाई राजनीतिमा लाग्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो अर्को मुख्य योजना हो ।